Torkia: mety mbola ho tafaverina indray ve ny fifandraisana amin’Isiraely? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jona 2010 21:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Español, македонски, Português, عربي, English
Satria moa nanatri-maso tamin'izay nitranga tao anatin'ny “vondron-tsambon'ny fahafahana any Gaza” notarihan'ny Tiorka iza tontolo izao dia nahita ihany koa ny fahasimban'ny fifandraisana teo amin'ireo Governemantan'i Torkia sy Isiraely. Mivandravandra ny fahatezerana mahazo ny Governemantan’ Isiraely any Torkia, ary hoharabaina ofisialy tahaka ny mahery fo ireo mafana fo rehefa tafaverina. Araka ny fanadihadihanay mikasika ireo fiatraikan'ireny zava-nitranga tamin'ny Tiorka ireny, dia mila apetraka ny fanontaniana: Mety hiarina indray ve ny fifandraisana misy eo amin'i Torkia sy Isiraely?
Ny tohin'ny politikam-pifandraisana amin'ny vahiny any Torkia
May ny sainam-pirenena Isiraeliana tany Istanbul, analiny ireo mpizaha tany nanafoana ny famadrihan'izy ireo hotely amin'ny fakan-drivotra any Torkia ary nandona mpitondra bisikileta Isiraeliana iray teo amin'ny bisikiletany ny mpahay lalàna iray androany, fa nietry tafalatsaka lalina ny fifandraisana eo amin'ireo mpinamana taloha, tranga tsy hita am-polony taona maro izany.
araka ny voasoratr'i James in Turkey. Niharehidrehitra ny fihetseham-pon'ny olona sy ny fanohanan'ny mponina tiorka an'i Gaza araka ny voamarika ato anatin'ity tweet avy amin'ny mpanao gazety mahaleo tena Fredericke Geerdink ity:
ny mpivarotra sainam-pirenena #üsküdar dia tsy nivarotra afa tsy ny sainam-pirenena tiorka, miaraka na tsia amin'ny sarin'i atatürk. Amin'izao dia mivarotra sainam-pirenena palestiniana koa izy ireo. #turkey
Tena ilaina ny manamarika fa ny vondron-tsambon'ny fahafahana any Gaza dia tsy tohanan'ny Governemanta tiorka, kanefa ny fanafihana ity vondron-tsambo kely ity dia lasa adihevitra nanerana ny firenena. Istanbul Calling manazava ity fifandraisana eo amin'ny vondron-tsambo voizin'ireo sivily sy ny vokany eo amin'ny tontolon'ny politika vahiny any Torkia:
Mivandravandra fa ela no niavin'ity fahatapahan'ny fifandraisana eo amin'i Torkia sy Israely ity . Araka izay efa nosoratako taloha dia nitsimbina ny fifandraisany tamin'Isiraely kokoa i Torkia, nandritra ny taona vitsivitsy, raha oharina amin'izay hita any amin'ny vava adin'i Palestina (na, ny marimarina tokoa, teo amin'ny vava ady misy any Gaza). Na dia tsy misy aza ny ifandiran'ny firenena roa tonta raha jerena ara-teknika, ity zava-mitranga any Gaza ity, amin'ny fomba maro no iavian'izany, dia lasa lohahevitra handrafitra indray ny fifandraisan'i Isiraely sy Torkia amin'izao fotoana izao ity olana ity. Amin'izay lafiny izay, na dia nokarakaraina ONG Tiorka (islamista IHH) aza ny fandefasana vondron-tsambo hanampiana an'i Gaza ary tsy notohanan'ny Governemanta Tiorka, dia niasa tahaka ny mifanakaiky amin'ny politika Tiorka izany.
Noho ny vokatr'io dia maro ireo mpitoraka blaogy sy tweet no niangavy ny governemanta Tiorka mba hiditra an-tsehatra amin'ny fandefasana sambo Tiorka hiaro ireo vondron-tsambo , tahaka ny hita ao amin'ity tweet-n'i Talk Turkey ity:
Fa maninona ny tafika an-dranomasina Tiorka no tsy mandefa Sambo Tiorka hiaro ireo vondron-tsambo mizotra mankany Gaza amin'izao fotoana izao…
Fa inona no nokasaina
Misy fanoherana midika zavatra tamin'ity tsy fananana porofo hita tamin'ity fanafihan'Isiraely ny vondron-tsambo. Araka ny voalazan'i Istanbullian:
Tsy nisy ny antony mahatonga ny fampiasana basy tamin'izy ireo. Indrindra fa any amin'ny fari-dranomasina iraisam-pirenena no misy azy… Ny fisiana antsy sy antsamotady tsy tokony itifirana olona, hatramin'ireo matory aza. Tokony niandry an'ireo sambo kely ho tonga ao amin'ny faridranon'i Gaza ny miaramila Israeliana. Avy eo dia tokony nibaiko ireo sambo ireo hiverin-dalana sady tsy mampiantsona azy ireo. Ny nataon'Isiraely dia tena mifanohitra amin'ny lalàna iraisam-pirenena ary ho mora ny fandresen'i Torkia eny amin'ny fitsarana iraisam-pirenena.
Idilx manamarika amin'ity manaraka ity ao amin'ny Twitter:
Heveriko tokoa fa nametraka fomba vaovao i #Israel teto. Manana alalana hitifitra amin'ny zava-drehetra heverintsika fa miendrika fitaovam-piadiana isika izany izao. #flotilla
Oooo kamio-na gilasy .. BANG BANG. Oooo zaza 4 taona misy mibontsina amin'ny patalohany.. tena misy basy mihitsy any aminy.. bang! Idjits. #Gaza #Flotilla #Israil
Nanontany ny fihetsiky (na izay mety ho fihetsiky) ny Governemanta Tiorka tamin'ity zava-nitranga mikasika ireo vondron-tsambo ireo ny mpi-tweet sasany, ao amin'ny Talk Turkey:
Hihantsy ady amin'ny Isiraely ve i Torkia? … Tsy mandeha lavitra akory… Ao anatina ‘tetik'ady’ mivelatra daholo izany rehetra izany
Ary ity iray ity ao amin'ny fgeerdink:
Ry namana tiorka: ‘namorona ity zava-drehetra mikasika ny vondron-tsambo ity i erdogan #flotilla mba hampitombo ny lazany indray ilazany fa matotra izy #conspiracytheory #turkey
Na izany aza, ny fahasimban'ity fifandraisana ity dia mampametram-panontaniana mikasika ny fiarovana, ao amin'ny Idilx:
Lasa toerana mampahatahotra ireo Jiosy Tiorka ve i #Torkia? Hita fa na aiza na aiza ahitana mpanavakavaka ary tsy hijanona amin'ny fahadalany izy ireo. Mora arehitra.
Ny fotoana ihany no afaka hilaza izay mety ho tohin'ny raharahan'i Torkia sy Isiraely. Ny teny farany ato amin'ity lahatsoratra ity dia an'ny mpitoraka blaogy sy mpanao gazety The White Path izay mitanisa ireo fahasamihafan'ny filozofia Tiorka sy ny filozofia Isiraeliana:
Raha nanontany Israeliana mpirona amin'ny tanjaka aho taona maro lasa izay, dia nahazo valinteny milaza zavatra: “ny hery,” hoy izy, “no mametraka ny fahamarinana.” Izany hoe izay izany no finoana manjaka any Tel Aviv sy any Jerosalema izay bodoina, fa tsy aty Istanbul. Raha ny marina dia ny mifamadika amin'izay mihitsy no lazain'ny finoanay: ny fahamarinana, na ho ela na ho haingana , no hahery.
Manana izany finoana izany ao am-pony ireo maherifo an-jatony nandeha sambo nizotra nakany Gaza tamin'ny herinandro iny. Aty Torkia, olona 70 tapitrisa no mitsangana eo anilan'izy ireo. Mitomany ho an'ireo namanay lavo izahay, kanefa mahafantatra ihany koa fa tsy maty tamin'ny tsy misy dikany izy ireo. Ny fanaovan'izy ireo sorona ny ain'izy ireo dia nampahafantatra ny eran-tany tsy ny fijalian'ireo tsy manan-tsiny any amin'ny ghetto any Gaza ihany, fa ny habibian-toetran'ny fanjakana liandrà nahatonga izany.
Banjino ny lazain'ny molotro: tsy ho faty ity hevitra ity. Izahay Tiorka dia mijoro hatrany ho an'ny marina, tsy mijery ny herin'Isiraely. Tsy misy afaka hampiova izany na ny fanatambatambazany, ny fampijaliany na ny famonoany.